Semalt सल्लाह - सबैभन्दा शक्तिशाली उपकरण जसले वेबसाइट पृष्ठहरू डाउनलोड गर्न मद्दत गर्दछ
के तपाईं आफूले पढेको कुराको लागि वर्ल्ड वाइड वेब खोजी गर्न पछाडि जानुभएको छ तर फेला पार्न सक्नुहुन्न? यो काफी निराशाजनक छ, र समस्या आउँछ जब तपाईं अफलाईन प्रयोगको लागि वेबसाइट पृष्ठहरू डाउनलोड गर्न समय लिनुहुन्न। अवश्य पनि, यो वेब सामग्री च्याप्प्न सम्भव छ, र यसले तपाईंको समय र उर्जा एक हदसम्म बचत गर्न सक्दछ किनकि तपाईंले ती निश्चित पृष्ठहरू जाँच गर्न तपाईंको वाइफाइ बारम्बार जडान गर्नुपर्दैन।
भाग्यवस, केहि अन्तर्क्रियात्मक उपकरणहरू र सफ्टवेयर छन् जुन अफलाइन पठनका लागि वेबसाइट पृष्ठहरू डाउनलोड गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईं यी सेवाहरूको साथ स्निपेट्स, छविहरू, र भिडियोहरू बचत गर्न सक्नुहुनेछ।
पकेट, यसलाई पछि पढ्नुहोस् भनेर पनि चिनिन्छ, नेटमा सब भन्दा राम्रो र सब भन्दा शक्तिशाली उपकरणहरू मध्ये एक हो। यो दुनिया भर मा सयौं देखि हजारौं सदस्यहरु छ र यसको प्रयोगकर्ता मैत्री ईन्टरफेस को लागी परिचित छ। पकेटको साथ, तपाईं वेब पृष्ठहरू वेब पृष्ठहरू आरामसँग डाउनलोड गर्न वा बचत गर्न सक्नुहुन्छ। यो 300०० भन्दा बढी अनुप्रयोगहरूसँग एकीकृत छ र दुवै तपाईंको स्मार्टफोन र पीसीसँग उपयुक्त छ। थप, तपाईं यो उपकरण फेसबुक र ट्विटर पोस्टहरू डाउनलोड गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको साथी र परिवारका साथ तपाईंको अनुकूलित पॉकेट अनुप्रयोग सिर्जना गर्न र साझेदारी गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले यसको आधिकारिक वेबसाइटमा खाताको लागि साइन अप गर्नुपर्नेछ र पकेट स्थापना गर्नुपर्नेछ। एक पटक स्थापना पूरा भएपछि, तपाईले आफ्नो ब्राउजरमा एउटा बटन देख्नुहुनेछ जुन यस अनुप्रयोग प्रयोग गर्न क्लिक गर्न सकिन्छ।
२ वेब्याक मेशिन:
पकेट जस्तै, वेब्याक मेशिन एक उत्कृष्ट र भरपर्दो उपकरण हो जुन पछाडि पढ्नका लागि वेबसाइट पृष्ठहरू डाउनलोड गर्दछ। यो सेवा ईन्टरनेट संग्रहबाट होस्ट गरिएको छ र हामीलाई बिभिन्न वेब पृष्ठहरू अतीतमा कस्तो देखिन्थ्यो भनेर हेर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं यो प्रोग्राम डाउनलोड गर्न वा धेरै वेब पृष्ठहरू तपाईं चाहानुहुन्छ बचत गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं समान वेब पृष्ठको बहु संस्करणहरू सिर्जना गर्न वेब्याक मेशिन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको कम्प्युटरमा यसलाई विभिन्न ढाँचामा भण्डार गर्न सक्नुहुनेछ। यसको मतलब यो हो कि यदि तपाइँ वेबपेजबाट लगत तान्न चाहानुहुन्छ जुन लामो समयदेखि गयो, सम्भावनाहरू छन् कि वेब्याक मेशिनले तपाईका स्नापशटहरू आरामसँग पाउनेछ।
Read. पढ्न योग्यता:
एकपटकमा विभिन्न वेब पृष्ठहरू बचत गर्न पठनीयता एक उत्तम र सबैभन्दा विश्वसनीय उपकरणहरू मध्ये एक हो। यो मुख्य रूपमा साइटबाट अनावश्यक अव्यवस्था हटाउँछ। यदि तपाईं अफलाईन हुँदा तपाइँको मनपर्ने पृष्ठहरू पहुँच गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ वा पूरा साइट डाउनलोड गर्न चाहानुहुन्छ भने, तब पढ्न योग्यता तपाइँको लागि सहि अनुप्रयोग हो। यो कुनै वेब पेज डाउनलोड गर्न को लागी विज्ञापन, फ्ल्यास सामग्री र जटिल छविहरूको कुनै परेशानी बिना प्रयोग गर्न सकिन्छ। पढ्न योग्यता एक उपयोगकर्ता मैत्री अनुप्रयोग हो र सुविधाहरू र विकल्पहरूको धेरै संग आउँछ। यसले तपाइँलाई एक पटकमा धेरै साइटहरू लक्षित गर्न अनुमति दिन्छ र तपाइँको उर्जा बचाउँछ।
Evernote वेबसाइट पृष्ठहरू डाउनलोड गर्न सबैभन्दा प्रसिद्ध र व्यापक प्रयोग गरिएको अनुप्रयोग हो। यो तपाईं क्लिप र गुणवत्ता मा सम्झौता नगरी वेब सामग्री बचत गर्न अनुमति दिँदछ। तपाईं Evernote दुवै व्यावसायिक र व्यक्तिगत उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो प्रयोग गर्न सजिलो छ, र तपाईले नि: शुल्क खाताका लागि साइन अप गर्नुपर्नेछ। यदि तपाईं पृष्ठहरू अडियोहरू, भिडियोहरू र छविहरू बिना बचत गर्न चाहनुहुन्छ भने, Evernote ले तपाईंको काम सजिलो बनाउँदछ। यो पीसी र स्मार्टफोनलाई समर्पित छ र सबै अपरेटि systems प्रणालीहरूसँग उपयुक्त छ।